Hiran State - News: Xulka qaranka Hiiraan State oo dhiiragalintii ugu weyneyd ka helay qurbajoogta reer Hiiraan.
Xulka qaranka Hiiraan State oo dhiiragalintii ugu weyneyd ka helay qurbajoogta reer Hiiraan.
Tartanka ka socda gobolka Nugaal waxuu suuragaliyey iney isku arkaan shacab Somaliyeed oo mudo 20 sano ah kala xayirnaa. Shacabka reer Hiiraan kuwooda xilkaska ah ayaa si weyn u amaanay dhamaanba shacabka Nugaal iyo maamulka Puntland oo nabad leysku haleyn karo ka dhaliyey degaanadooda taas oo suuragalisay in ay maanta marti u noqdaan Somali oo dhan.
Intaas kedib waxaa maanta ciyaarayo Qaranka Hiiraan oo iyagu bilaawkii ciyaaraha ku soo galay qaab indhacadeys ah kedib markii laga hor istaagay safarkii ay ku imaanayeen Garoowe oo ay xabsi dhigeen Shabaab oo ah kooxda xooga ku heysata inta badan Hiiraan State.
Kooxda Qaranka Hiiraan ayaa u soo gudbay wareega 8aad kedib markii ay afka ciida u dareen Sh/hoose hase ahaatee waxaa dhiiragalin dhinackasta ah siinayo ciyaartooydii cuslaatay ee hore ugu soo ciyaari jiray Hiiraan. kooxda ayaa sida warar xaqiiqda u dhaw lagu helayo la sheegay in maalin iyo habeen dibadaha laga waco si niyada loogu dhiso iyadoo baahi kasta oo ay sheegtaan leysku dayayo in la xaliyo maadaama ay u ciyaarayaan sharafta iyo jiritaanka reer Hiiraan.
Ciyaarta maanta dhaceyso waxey isku arkayaan Banaadir oo inta taariikhda Somaliya la xasuusto ay xifaaltan dhinaca Sports-ka kala dhaxeysay Hiiraan xiligii bari samaadkii ayaa u muuqda kuwo aan laheyn ilko badan oo ay wax ku goyn karaan halka ciyaariyahanada reer Hiiraan ay inta aysan quraacan Qoonada ay caanka ku yahiin ku bilaabeen kubada halkaasne ay heer kaka gaareen ciyaaraha kubada cagta.
Hadaan dib ugu laabano ciyaarahii gobolada Somaliya Hiiraan waxey si weyn dhinaca ciyaarta isku necbaayeen J/hoose ciyaartii taariikhda gashay ee Somali oo dhan ka wada yaabisay waxey aheyd ciyaartii la magac baxday Moroodigii Qoonada Liqi waayey. kedib markii J/Hoose oo loo caalwaayey berigaa ay dhalintii ka socotay Hiiraan dhaheen isdeji oo xiligaas wargeyskii Ogaal ee dalka ka soo bixi jiray wajigiisa hore lagu soo sawiray Maroodi Qoono liqi la.
Hadaba markaad eegto dhiiragalinta dhalinta Hiiraan ay ka helayaan qurbajoogta iyo waliba sida looga saacidayo qaabciyaareedkooda oo tababaraha kooxda qaranka HS looga saacidayo waxaa kuu soo baxeysa in hadii Hiiraan maanta ka badiso Banaadir aysan u muuqan meel ay dib ugu laabtaan koobkuna noqon doono mid ay isku qabsadaan Hiiraan iyo Nugal amaba Hiiraan iyo Bari.
Dhinaca kale dhalinta Hiiraan waxey magalada Nugaal ku heystaan taageerayaal badan oo xitaa shacabka Nugaal waxey maanta taageerayaan Hiiraan maadama ay u arkaan marka loo eego Banaadir iney Hiiraan ay kaka dhaw tahay.
· admin on December 26 2010 13:36:37 · 1 Comment · 2005 Reads ·
#1 | ralph lauren sale on May 21 2012 14:20:56
14,613,054 unique visits